EyoMsintsi 30, 2016 by okwenyaniWW, Iimbono zizonke:
Kodwa masibe nomfanekiso ngqondweni wentelekelelo, kunye nomzekelo wokubonisa uza kusinceda ukuba babone indlela iinkonzo zokushicilela izindlu zibalulekile. Masithi indawo yakho oyibhengeza ngayo imveliso okanye iinkonzo zakho ziye zeza ntlanu zenkokheli eziphezulu zokukhutshwa kwenjini yokukhangela, ngoncedo lweenkonzo zokushicilela izindlu kunye okanye azibalulekanga, azibalulekanga. Kwaye umthengi onokubakho, umthengi akavuleli kuphela iwebhusayithi yakho, kodwa uninzi njengesihlanu okanye isithandathu, umzekelo, unocwangco, kwaye unqwenela ukuthelekisa umgangatho weenkonzo okanye iimpahla kwiinkampani ezahlukeneyo, enye yeyakho.
Kwaye apha, ukuba kukho ingqiqo ethile evela kwiinkonzo zokushicilela izindlu nomhlaba, siza kuyibona. Umtyeleli wesiza unokubona okufanayo kwizibonelelo ezahlukeneyo, ngokungathandisi izicatshulwa, emcela ukuba afake isicelo sokuthenga okanye inkonzo, esebenzisa iseti yamaqendu. Iinkonzo zokushicilela izindlu nezezakhiwo azisebenzi ngokuchanekileyo kwiindawo ezinjalo.
Kwimeko yokusebenzisa iinkonzo zokushicilela iipropathi ngelixa uyila iwebhusayithi yakho iya kwahluka kwabanye. Kuqala, isihloko siyakunika ngokucacileyo, kodwa isimboli eyilelwe yona kuqala undwendwe- "nantsi into oyifunayo". Okwesibini, thatha ingqalelo ukuba namhlanje umfundi akenzelwanga ukuba afundisise ngokunzulu izincoko ezinde ukuze amagama abalulekileyo kunye neendinyana aboniswe ngazo ngesicatshulwa esibukhali. Okwesithathu, iinkonzo zokubhala ngokurhweba ngepropathi, eneneni, kukukwazi ukubonisa izinto ezibalulekileyo kunye nokwenza ukuba zibonakale, zombini kwiinjini zokukhangela kunye nomfundi wesicatshulwa, ukuze izinto eziphambili zenkonzo yakho okanye imveliso zihonjiswe. ngendlela yoluhlu olunezimpazamo. Yiyo le nto iinkonzo zokushicilela izindlu zinokundwendwela iwebhusayithi yakho; ukumenza ukuba acinge "Nantsi eyona nto bendiyifuna".
Ke, iinkonzo zokushicilela izindlu nezindlu zilungiselela izicatshulwa eziguqula umthengi onokubakho ngokwenene. Kodwa ngaphambi kokuba kwenzeke oku, iinkonzo zokushicilela iipropathi zazigqiba omnye umsebenzi obalulekileyo, ngaphandle kwawo bekungayi kuba lula ukutsala iindwendwe kwisiza. Iinkonzo zokushicilela iarhente zenziwe ngumbhalo, zilungiselelwe ukuba zibuze imibuzo yenjini yokukhangela, ivumela indawo ukuba ivele kwezihlanu eziphezulu.
Ukuba undwendwe lufumana indawo yakho, ulwazi oluyimfuneko kwiphepha lezixhobo kwaye ukuba wenza i-odolo, iinkonzo zokushicilela izindlu ziyawugqiba umsebenzi wazo. Kungenxa yoko le nto sifuna iinkonzo zokushicilela izindlu nomhlaba. Ngaba uvukile uku-odola iinkonzo zokushicilela iipropathi zokunyusa iwebhusayithi okanye ukhethe ukulawulwa ngamandla akho, uya kuthi uzigqibe ngokwakho. Kodwa ukuba uyayiqonda ukuba iinkonzo zokushicilela iipropathi zibalulekile kwaye ziyimfuneko kuwe, funda inqaku elipheleleyo.
Ilula kakhulu. Uku-odola iinkonzo zokushicilela iipropathi, kufuneka uqhagamshelane neArhente yethu yokushicilela iarhente kwi-imeyile [Imeyile ikhuselwe] okanye ngokusebenzisa eli phepha ku Facebook
Isiseko seenkonzo zokushicilela izindlu nomhlaba
Undwendwe lwesiza lwahluke kakhulu kumntu owathenga iphephandaba okanye iphephandaba ukufundisisa okunesidima sokwenza iti yentsasa. Iinkonzo zokushicilela iipropathi zorhwebo zirhoxiswa yinto yokuba umsebenzisi we-Intanethi engafundanga kangako ngokujonga, eqhuba isicatshulwa. Umongo weenkonzo zokushicilela iipropathi zezindlu ziyakwazi ukutsala umdla walowo ufundayo. Nantsi indlela iinkonzo zamaphepha okushicilela ezindlu azenza:
Ulwazi, ukubetha ekujolise kuko, kuqukethe isibheno.
Umbhalo ongezantsi. Ngamanye amaxesha kuya kufuneka uqhekeze lo mbono, ukwenza iingxelo zenziwe lula kubafundi ukuba iinkonzo zokushicilela izindlu nezindlu azinakho ukujongana nalo msebenzi, ingqalelo yomsebenzisi we-Intanethi iyalahleka.
Uluhlu olunamagqabantshintshi. Iinkonzo zokushicilela iarhente zisebenzisa ukwamkelwa kokudweliswa koluhlu, ukwenza lula umsebenzi ukuhambisa umyalezo kumfundi.
Okubomvu kunye nokuzekeliswa. I-hook egqibeleleyo yinkonzo yokubhala ngokuthengiswa kwezindlu kunye nabantu abajonge kwiphepha lamashumi amathathu kwindawo yeshumi. Amehlo adiniweyo omsebenzisi we-Intanethi aya kuphumla ngombulelo kwiindawo eziyilwe kwisicatshulwa esifanayo.
Zisebenza njani iinkonzo zokushicilela izindlu nomhlaba?
Ngaphezulu nje kwakuthethwa kakhulu ngemimangaliso enokubakho ngeenkonzo zokushicilela izindlu, kodwa ngubani owenza le misebenzi mihle kangaka? Ababhali abasebenza kwiarhente yokuthengiswa kwezindlu nomhlaba ngabantu abanobuchule bokuyila, umsebenzi obunzima ngenxa yokuba iinkonzo zokushicilela iipropathi zidibanisa phantse imisebenzi yokuchaneka kwemathematics kunye nesidingo sophuhliso lobugcisa. Kwicala elinye iinkonzo zokushicilela izindlu ziyinxalenye ye-elektroniki, ikhompyuter, isoftware, ilizwe le-Intanethi, kwelinye icala, sisicatshulwa ekufuneka sibhalwe ngolwimi olunomdla, olunomdla. Zama nje ukudibanisa konke! Masidwelise amanyathelo awenziwe ngawo isicatshulwa, ahambelane nobungakanani beenkonzo zokushicilela izindlu nomhlaba
Ukuqhagamshelwa okucacileyo ngomxholo wesiza okanye umxholo wobutyebi be-intanethi oya kulandelayo ofuna iinkonzo zokushicilela izindlu. Umshicileli wearhente yokuthengisa izindlu nomhlaba unjengaye nayiphi na intatheli, oosomaqhuzu jikelele. Iinkonzo zokushicilela iarhente azibandakanyi ukungena kwindawo enzulu kuwo nawuphi na umbuzo, kwaye, kwangaxeshanye zifuna amandla okuqonda ngokukhawuleza nawuphi na kuzo.
Ukuphanziswa kwentloko ephakathi. Izandi azichukumisi, akunjalo? Kwaye enyanisweni, le nxalenye yeenkonzo zokushicilela iipropathi yindawo ethembekileyo yokusebenza, ifuna izakhono kunye nokuzonwabisa. Isiseko semantic sithetha iseti yamagama aphambili anokuhambelana nesiza kwaye aya kuba sisiseko sombhalo wexesha elizayo. Ngokwala magama, iindwendwe ziya kufuneka zikhangele indawo, phakathi kwabanye ngokusebenzisa iinjini zokukhangela.
Emva koko umshicileli wezindlu nomhlaba ufuna ulwazi olufanelekileyo esebenzisa la magama aphambili. Inkqubo ifana kakhulu nomsebenzi kwi-theisis okanye ikhosi. Nje ukuba ulwazi luchwethezwe kwaye lufundwe, lixesha lokuba le yinxalenye yeenkonzo zokushicilela iipropathi, eziza kubonakala kuye wonke umntu.
Umshicileli wenza isicwangciso senqaku elizayo. Okwangoku, iinkonzo zokushicilela izindlu nomhlaba zifana kakhulu nobuntatheli.
Eyona nto ibalulekileyo kukubhala inqaku. Ukuba kumanqanaba angaphambili kakhulu kuxhomekeke kubuchule bezenzo, ngoku italente iyazibonakalisa, okanye ukusilela kwayo. Akunakwenzeka ukuba ufunde ngokulula kwaye ngokukhawuleza ubhale kakuhle nangokuchanekileyo, oku kunokufunda ngokuhamba kwexesha, phantse yonke imihla ukuziqhelanisa nobugcisa bababhali. Okwangoku, ukurekhodwa kwearhente yobugcisa kunye nobugcisa. Rhoqo, xa abantu besebenza njengeqela, kukho ukwahlula-hlula kwemisebenzi, umntu ubhala isiseko semantic nayo yonke into enxulumene nayo, nomnye umntu, bhala nje ngesihloko esinikiweyo, kwaye owesithathu enze isicatshulwa esiphumelelayo kumagama aphambili. Kodwa kuyenzeka ukuba umshicileli wesakhiwo abambise ngobuchule bonke ubuchule obufunekayo kunye neenkonzo zokushicilela izindlu nomhlaba.
Inqanaba elilandelayo elibalulekileyo kukufunda isicatshulwa.
Ukujonga onke amagama aphambili kwisicatshulwa.
Ukuqaqambisa amagama aphambili.
Ukuba nesishwankathelo nje esifutshane somsebenzi womshicileli wezindlu, umntu unokutsho ngokuqinisekileyo ukuba iinkonzo zokushicilela izindlu nomhlaba ziluhlobo olunzima apho ii-amateurs zingenandawo. Nangona kunjalo, i-Intanethi igcwele kwaye inikezela ukwenza ubhalo lwearhente yokuthenga izindlu, kodwa ngokwexabiso lokulahla, iya kuba ngumsebenzi we-amateur osezantsi. Ke ngoko, inxenye yokugqibela yenqaku ibaluleke kakhulu.
Ungayikhetha njani incwadi yomshicileli wezindlu?
Okokuqala, umnini-kopopayi wokuthengiswa kwezindlu kufuneka abe nakho ukunika ipotifoliyo engathethekiyo. Kwisiseko samava angaphambili, ubungakanani kunye nezihloko zamanqaku abhaliweyo, umgangatho wemisebenzi yangaphambili unokunceda ukwenza ukhetho olunolwazi phakathi kobuninzi beziphakamiso. Kuyimfuneko ukufunda ngononophelo kwipothifoliyo yabagqatswa.
Okwesibini, ixabiso. Singasoloko siva izinto ezinjalo zibhekiswa kubabhengezi bezindlu: musa ukuthoba umsebenzi wakho, ungalahli amaxabiso, umsebenzi wakho uyabiza. Kodwa ndingathanda ukujongana nesibheno esifanayo kubathengi beenkonzo zokushicilela izindlu nomhlaba. Sukuhlawula umsebenzi okwinqanaba eliphantsi, wena kunye nabaxumi bakho nifanele ngaphezulu, khetha abakhupheli bezindlu abazisebenzelayo zibiza kakhulu, kuba xa kutyalo-mali bekho imali eninzi, inyusa imbuyekezo.
Okwesithathu, kwaye mhlawumbi ibaluleke kakhulu. Mamela iingcebiso zabo sele bezonwabele iinkonzo zokushicilela iipropathi, baya kukhuthaza abasebenzi abanamaxabiso kunye nomgangatho ofanelekileyo.
Sikucebisa ukuba uthathe ithuba leenkonzo zokushicilela iipropathi ezinikezelwa kwiarhente yesakhiwo, ngokulandela nje eli phepha.
Iinkonzo zokuRhweba ngokuThengisa iiarhente kwi-realtyWW
Ngaba iinkonzo zokushicilela iipropathi ziyinxalenye eyimfuneko yophuhliso lwamashishini kwi-Intanethi, ukukhuthaza amaziko, okanye ngaba, emva kwayo yonke loo nto, ikhonkco elingafunekiyo, umondli wabazalwana abahlukeneyo bababhali, ogcwele kuthungelwano lwehlabathi? Ngaba kunokwenzeka ukuba bayayixhasa ingcinga yokuba iinkonzo zokushicilelwa kwepropathi ziyimfuneko, nangona kunjalo?
okwenyaniWW Septemba 30, 2016
Olu ngeno yafakwa kwi Intengiso yeNtengiso yePropathi noqhotyosho Umthengisi wentengiso, Ukubhalwa kokubhala, Umbhali wenqaku, Inkonzo yokubhala amanqaku, Inkonzo yokuBhala kwiBlog, Ukubhalwa kokubhala phantsi, Iinkonzo zokuShicilela ukuBhala eziNcinci, Umbhali wesiqulatho, Ukubhala Umxholo, Ukubhalwa kwesiqulatho seewebhusayithi zentengiso, Ukubhala umxholo kwiarhente yokuthengisa izindlu, Khuphela Bhala, Khuphela Ukubhala, Umshicileli, I-Freelance ye-Copywriter, Ikopi yokuthengisa izindlu, Ikopi yokuthengisa izindlu, Iinkonzo zokushicilela, Amaxabiso eeNkonzo zokuKopa, Amaxabiso eeNkonzo zokuKopa, Umshicileli wezezimali, Umshicileli wezezimali, Ukubhalwa kweencwadi zemali, Umshicileli osebenza ngokukhululekileyo, Umbhali we Freelance, UkuBhala ngokuBoniswa, Ukushicilela okuGqibeleleyo, Ukukhutshelwa komthetho, Ukushicilela kwi-Intanethi, Ukubhalwa kweNgcali, Umshicileli wepropathi, Ukubhalwa kwepropathi, Ukubhalwa kweNqaku learhente yokuthengisa izindlu nomhlaba, Umxholo webhlog yeNdawo, UMboneleli weBhloko yokuThengiswa kweZindlu kunye nomhlaba, Inkonzo yokubhala i-Real Estate yeBlog, Umbhali wesiqulatho searhente, Ukubhalelwa imixholo yokuthengisa izindlu nomhlaba, Umshicileli wezindlu, Ukukhutshelwa kwencwadi yokuthengisa izindlu nomhlaba, Iinkonzo Zokushicilela iiRhwebo ngeeNdawo, Ukubhala imixholo ye-SEO, Ukushicilelwa kwe-SEO, Iinkonzo zokuShicilela kwi-SEO, Ukubhala kwe-SEO, Umbhali weWebhu, Iinkonzo zokuShicilela kwiWebhu, Ukubhala imixholo yeWebhusayithi, Iinkonzo zokuShicilela kwiWebhusayithi, IiNkonzo zokuBhala. Bookmark le Permalink.
Septemba 8, 2016 Iinkonzo zokuRhweba ngokuThengiswa kwePropathi yeNdawo kwiRealWW Wamkelekile kwi-RealtyWW! Apha uhlala, ubhala kwaye uthatha i-odolo lomshicileli Lesja Poberezhets. Ukuba usebenzisa iinkonzo zam zokushicilela izindlu nomhlaba, uya kufumana ukupapashwa okuqinisekileyo kwi-RealtyWW. Ingqondo yokuyila, ukulesa, ukuthanda ishishini lakho kundivumela ukuba ndibhale izinto ezintle, ezikumgangatho ophezulu, ezifanelekileyo zentengiso malunga nawo nawuphi na umxholo, kubandakanya neNdawo yokuhlala, ukuPhuculwa kweKhaya, ukwakha, ezemali, iYadi kunye neGadi, eluhlaza njl. umntu othobekileyo, onoxanduva lokwenene […] exhonyiweyo Intengiso yeNtengiso yePropathi